ပြည့်ဖြိုး (နည်းပညာမျှဝေခြင်း): KBG Archiver (File များကို အံ့မခန်း ချုံ့ပေးနိုင်သည်)
KBG Archiver (File များကို အံ့မခန်း ချုံ့ပေးနိုင်သည်)
သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး စိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့( Highly Compress ) အံ့မခန်းဖွယ် File
တွေကိုချုံ့ပေးနိုင်တဲ့ Software လေးကို ကျွန်တော်ရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီဗျာ။ ရှာတွေ့ထားတာတော့ ကြာပါပြီ
တည်းစမ်းသုံးကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘော်ဒါတွေကိုလည်း စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ပြောထားပါ
တယ်။ အားလုံးကလည်းအဆင်ပြေကြတယ်ပြောလို့ ကျွန်တော်သုံးတာလည်းအဆင်ပြေသွားလို့အခုလိုစိတ်
ဒီ Software လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့လို Upload တင်တဲ့သူတွေ
အတွက် အကောင်းဆုံးဘဲဗျ။ ကြီးချင်သလောက်ကြီးတဲ့ File တွေ လာခဲ့ ဒါလေးနဲ့ ချုံ့ပြီး အေးအေးဆေး
ဆေး Upload တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လောက်တောင် ချုံ့နိုင်လည်းဆိုရင်2GB 3GB လောက်ရှိတဲ့
File တွေကို 10MB လောက်ဘဲကျန်အောင်ချုံ့နိုင်လို့ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့်အချိန်တော့စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီးပေး
ရပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ချုံ့တာ 5နာရီ ၀န်းကျင်ကြာပါတယ်။ အသုံးပြုပုံလေးကလည်း လွယ်ကူရိုးစင်းပါ
တယ်။ အောက်က ပုံလေးကိုကြည့်ပါ။
Step - 1 အပေါ်ဆုံးက Archive အကွက်မှာ မိမိပေးချင်တဲ့ File Name ပေးလိုက်ပါ။
Step -2Archive Format မှာတော့ KGB ကိုရွေးပေးပါ။ Zip ကိုရွေးလည်းရပါတယ်။ KGB က ပိုပြီး ချုံ့
Step -3Compression Level မှာတော့ Maximun ကိုရွေးပေးပါ။
Step -4Add File နေရာမှာတော့ မိမိချုံ့ချင်တဲ့ File ကိုရွေးပေးပါ။
Step -5ပြီးသွားရင်တော့ Next ကိုနှိပ်ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ File ကိုစတင်ချုံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ အချိန်တော့ပေးနိုင်ရပါလိမ့်မယ်။
သူငယ်ချင်းများအားလုံးအောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD) at 8:56 PM
ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ... ကျွန်တော်စမ်းတုန်းက ပထမ install လုပ်မရပါဘူး... ခုတော့လုပ်လို့ရသွားပါပြီ... ဒါပေမယ့် ချုံလို့မရသေးပါဘူး... error တစ်ခုတက်နေပါတယ်...option ---> Explor shell extension ထဲက *kgb ပဲရွေးရွေး *zip ကိုပဲရွေးရွေး Access to the regisity key " HKEY-CLASSES-ROOT\_.Kgb" is denied. ဆိုပြီးပြနေပါတယ်...
Pyae Phyo (MMiTD) June 20, 2012 at 9:02 PM
ကျွန်တော်ပေးတဲ့ Version ကိုဘဲသုံးပါ။ အကိုသုံးတာက Beta Version ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တေ်ာကတော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ။ တစ်ခုဘဲ
ရနံ့စံအိမ် July 22, 2012 at 10:44 PM
ဝေငှခွင့်ပြုပါဦးဗျာ၊ မသိသေးသူတွေ သိအောင်လို့ပါ။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
Anonymous July 31, 2012 at 10:29 PM
အစ်ကိုရေ အစ်ကိုပေးတဲ့ software တွေသုံးရတာ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ခု အကြံပေးချင်လို့ပါ။ အစ်ကို့ ဆိုဒ်မှာက Animation တွေအရမ်းများတော့ internet မကောင်းတဲ့အချိန် ၀င်ကြည့်ရတာ မဆင်လို့ပါ။ အရမ်းလေးပါတယ်။ animation လေးတွေ နည်းနည်းပဲ ထားတယ် ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အကြံပေးပါတယ်။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ
Anonymous September 18, 2012 at 9:01 AM
I've already tried but can't download from minus.If possible,please upload to another file sharing site to download easily.I'm very interesting in KGB Archiver. Thanks.
Now I've got that KGB Archiver.Thanksalot.
DriverPack Solution v12.3 Final
Ornagai Mobile Dictionary Version 2.0 (Java Phone)...
Talking Tom & Ben News Free 1.0.2 For Android
ကိုယ်ပိုင် Flash Ebook လေးလုပ်ကြမယ် Ncesoft Flip B...
Android Phone ရဲ့ Internet ကို Wifi ပြန်လွင့်ဖို့ ...
FIFA 12 v1.2.5 For Android
Wifi လွင့်နည်းများ (Ebook)
Android Phone အတွက် Theme လန်းလန်းလေး (Go Launcher...
Firefox ကို 3D Version နဲ့ အမြင်ဆန်းစေဖို့ FoxTab...
Kaspersky Mobile Security 9.10.112 For Android
Android Phone များအတွက် Mozilla Firefox 2012
Windows XP ,7, Vista တင်နည်း (Ebook)
Android Phone မှာ Facebook သုံးမရသူများအတွက်
Android Phone များအတွက် အင်တာနက်ကနေ Viber သုံးပြီ...
Website များတွင် Download ဆွဲနည်း (Ebook)
KBG Archiver (File များကို အံ့မခန်း ချုံ့ပေးနိုင်သ...
iCare Data Recovery Professional 4.6.4
Kaspersky Remover v1.0.162
Mobile Phone များအတွက် Dr. Web Anti-virus
Computer Maintenance Softwrae & Recover Software
USB ထိုးလို့မရအောင် ပိတ်ဖို့အတွက် USB Port Locked
Kaspersky Internet Security - 2013
Copy ကူးတာတော်တော်မြန်ပါတယ် (Teracopy2.2.7)
Window XP (Highly Compress) 9.3MB
ရေတံခွန်လှလှလေး နဲ့ Screen Saver
Android ဖုန်းကို Root လုပ်နည်းနှင့် + Android ဖုန်...
Speed Up My PC 2012 (Latest Version)
DMDE 2.4.3.434 Beta Portable
Animation Wallpaper Selection
Oxford English to English Dictionary Portable
Avria Antivirus Premium 2012 Full Version
Windows Xp SP3 Veleno OS (9.7MB)
Your Find Downloader (Software မှန်အမျှရှာဖွေဒေါင်...
Adobe PhotoShop - Web Designer Guide (မြန်မာဘာသာပြ...
Sony Ericsson PC Suite v6.011.00
ကွန်ပြူတာအများအပြားအား Remote လုပ်ကာထိန်းချုပ်ထားန...
O&O DiskRecovery Tech Edition v7.1.187 + Keygen
ဘိလိယက် ကစားကြမယ် - 3D Live Pool v2.32
Window 8 ချစ်သူများအတွက် Window 8 Loader v2.7.4
ISA Sever 2006 Configuration မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်
USB Safely Remove 5.1.3
History မှန်သမျှကိုရှင်းလင်းပေးမယ့်History Clean
Install Block 2.07
USB မှ Virus ၀င်ခြင်းကို ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်ပေးနိုင...
ရုပ်ပြောင်ပုံလေးတွေဖန်တီးဖို့အတွက် Funny Photo Mak...
iphone က 3G အင်တာနက် ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ သုံးကြရအောင်...